ICorona izoba nomthelela omubi emnothweni wakuleli - Ilanga News
Home Izindaba ICorona izoba nomthelela omubi emnothweni wakuleli
ICorona izoba nomthelela omubi emnothweni wakuleli
izisebenzi ezingabalelwa ku-370 000 iReserve Bank iveza ukuthi zizolahlekelwa yimisebenzi ngenxa yokuvalwa
kwamabhizinisi kulandela ukuqubuka kwe-coronavirus emhlabeni. awu-1 600 amabhizinisi okulindeleke ukuba awe bhu. IZITHOMBE NGU: SABELO MASUKU
UKUVALWA kwamabhizinisi kuleli izinsuku eziwu-21 ukuze kunqandwe ukwanda kweCovi-d-19, kuzonciphisa umnotho wezwe ngamaphesenti aphakathi kuka-2 kuya ku-15 nonyaka.
Izisebenzi ezingaba ngaphezulu kuka-370 000 zizolahlekelwa yimisebenzi kanti amabhizinisi abalelwa ku-1 600 azovalwa ngci.
Konke lokhu kuyisibikezelo sebhange lezwe, iReserve Bank, kanye nenhlangano yamazwe asethuthukile, i-OECD.
Lezi zibikezelo zingase zishintshwe zibe zimbi kakhulu uma uhulumeni ephoqeleka ukwandisa isikhathi sokuvalwa kwamabhizinisi sedlule ezinsukwini eziwu-21.
Kunemibiko ethi lokhu kungase kwenziwe ngenxa yokuthi kasikho isiqiniseko sokuthi isivinini sokwanda kwaleli gciwane siyehla.
Lesi siqiniseko singatholakala uma sekwandiswe izikhungo lapho izakhamizi zakuleli zingaya khona ukuze zihlolwe ukuthi zinalo noma cha leli gciwane.
Ephawula ngale mibiko uMengameli Cyril Ramaphosa, uthe uhulumeni uzocubungula maduze nje imibiko evela kososa-ensi bezempilo kanye nezifo ezithelelanayo.
Yile mibiko eyokhomba ukuthi ukuvalwa kwamabhizinisi nokuvinjwa kwabantu ukuthi bagcwale imigwaqo kube nomthelela omuhle yini empini yokulwa naleli gciwane.
Lokhu kusho ukuthi uma le mibiko ikhomba ukuthi ukuvalwa kwamabhizinisi izinsuku eziwu-21 kakubanga wusizo olutheni, uhulumeni uzophoqeleka ukwandisa izinsuku zokuvalwa kwamabhizinisi, noma enze eminye imizamo yokunciphisa ukwanda kwegciwane.
Ngenxa yokuthi leli gciwane landa ngokuhlangana kwabantu, kakukho zinyathelo ezingathathwa wuhulumeni ezingeke zahlukumeza ukusebenza komnotho.
Izwe laseNingizimu Afrika selingene esontweni lesithathu lokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe.
Lesi sinyathelo sathathwa ukuze kuncishiswe ukuhamba nokuxhumana kwabantu, okuyiwona mgudu omkhulu wokwanda kwaleli gciwane.
Enye ingxenye yomnotho, ikakhulukazi leyo ekhiqiza iphinde ithengise ukudla (ngaphandle kwezindawo zokudlela) kanye namakhambi esilungu, iyaqhubeka nohwebo kodwa ngaphansi kwemigomo ethile.
Izitolo kazivunyelwe ukuba namakhasimende angaphezulu kuka-50 ngaphakathi esitolo ngasikhathi sinye. Kanti futhi kumele amakhasimende aqhelelane uma eselinde ukukhokha.
Emzamweni wokunxephezela amabhizinisi nezisebenzi ngenxa yalesi sinyathelo, uhulumeni uzonika usizo lwemali kumabhizinisi azithola esebunzimeni ngenxa yokuphoqeleka ukuvala.
Lolu sizo luzotholakala esikhwameni se-UIF nese-Industrial Development Corporation (IDC). Phezu kwalokhu, kunohlelo lokuxhasa izisebenzi ezihola kancane ngo-R500.
Inhlangano eqoqa intela, iSARS, yona izobonelela amabhizinisi ikakhulukazi amancane, ngokuthi ixegise imigomo yokubhadalwa kwentela.
Embikweni ewukhipha kane ngonyaka, i-Reserve Bank ibikezela ukuthi umnotho wakuleli uzoncipha kulo nyaka ngenani elingafinyelela ku-4% ngenxa yokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe izinsuku eziwu-21.
I-Reserve Bank iphinde ibikezele ukuthi izisebenzi ezingabalelwa ku-370 000 zizolahlekelwa yimisebenzi ngenxa yokuvalwa kwama-bhizinisi kanti (amabhizinisi) awu-1 600 wona kulindeleke ukuthi awe bhu.
Kutheleka leli gciwane nje kuleli, umnotho wezwe usuneminyaka untenga. Ucwaningo lwe-Reserve Bank lukhomba ukuthi ukuntenga komnotho wakuleli sekuthathe isikhathi eside emlandweni waleli.
Ngaphambilini umnotho wakuleli ubuvame ukuntenga isikhathi esingaphansana kwemi-nyaka emibili. Kodwa lo mkhuhlane wamanje usuthathe ngaphezu-dlwana kweminyaka ewu-6.
Umnotho wakuleli wakhula ngo-0,2% ngonyaka odlule.
Ancipha namathuba emisebenzi ngonyaka owedlule, lehla inani labantu abasebenzayo lafinyelela ku-16.34 million ekupheleni kuka-2019, lisuka ku-16.44 million ekupheleni kuka-2018. Kodwa landa inani labantu abangena emakethe yemisebenzi ngabantu abangu-480 000 ngonyaka odlule.
Ukwanda kwenani labantu abangena okokuqala emakethe yemisebenzi, kudalwa yizingane eziphuma esikoleni zingakaphothuli u-matric, yilezo eseziphothu-lile, kodwa ezingezukuqhubeka nezifundo zazo, nalezo eziphuma ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Ibhange lezwe libika ukuthi kule minyaka eyishumi eyedlule, bangu-2.52 million kuphela abantu abakwazi ukuthola imisebenzi kanti bangu-4.87 million abantu abangene okokuqala emakethe yemisebenzi.
Lokhu kuyinkomba yokwehluleka komnotho wezwe ukudala amathuba emisebenzi anganela inani lezisebenzi ezikhona. Yingakho-ke inani labantu abentula imisebenzi nalabo asebeyekile ukuyifuna selenyukile.
Inhlangano yamazwe asethuthukile, i-OECD, ibika ukuthi umnotho wakuleli ungase unciphe ngaphezulu kuka-15% ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi.
Ukuvalwa kwezitolo nokuncishiswa kwezokuthutha kuzosho ukuthi amabhizinisi ancike kule mboni kawazuthengisa lutho. Ukuthengiswa kwezingubo, izicathulo, amafenisha asendlini namaholide okungcebeleka kumile nse.
Uhwebo oludinga ukuthi umthengi nomthengisi babone ngamehlo nalo lumile. Singabala lapha ukuthengiswa kwezimoto nokulungiswa kwezinwele nezi-nzipho. Izindawo zokudlela, ama-hhotela, ezokuzijabulisa nokungcebeleka nazo kazitholi lutho.
uSikhakhane, oke wasebenza njengomkhulumeli kaNgqongqoshe wezezimali nebhange lezwe, useyiphini lomhleli weConversation Africa. akubhalayo akuyona imibono yomqashi wakhe.
Previous articleUkuqaleka kuzokhipha izidumbu uma ingapheli i-lockdown
Next articleLeli Phasika linenselelo entsha kumaKrestu